खेल प्रदर्शन - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र विश्राम
अब तपाइँको खेल प्रदर्शन बृद्धि गर्न एक फार्मास्यूटिकल मुक्त तरीका छ!
डेभिड प्रसन्नता प्रो एक पोर्टेबल ह्यान्ड-होल्ड गरिएको उपकरण हो जुन को एक अद्वितीय फ्यूजन प्रदान गर्दछ अडियो-दृश्य प्रविष्टि (AVE) र Cranio- इलेक्ट्रो उत्तेजना (CES) तपाइँ शिखर मानसिक र शारीरिक प्रदर्शन हासिल गर्न, राम्रो निद्रा प्राप्त गर्न, र ऊर्जा स्तर वृद्धि गर्न मद्दत गर्न।
एक सकारात्मक, स्वस्थ दिमाग राज्य एक प्रतिस्पर्धी एथलीट उत्कृष्ट प्रदर्शनको लागि आवश्यक किनारा दिन सक्छ। एक एथलीट दिमागमा प्रतिस्पर्धाको दौरान असफलता बारे शंका, तनाव र चिन्ताका विचारहरू प्रदर्शनमा विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ। यो ती विचारहरूको कारण हो जुन एथलिटहरूले प्रशिक्षण र अभ्यासको क्रममा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ तर प्रतिस्पर्धाको दबाबमा बकल्दछ। किन खेलाडीहरूले यस प्रदर्शन चिन्ताको अनुभव गर्छन्? वर्षौंको प्रशिक्षणले किन उत्कृष्टता प्राप्त गर्न आवश्यक आत्मविश्वास र नियन्त्रण प्रदान गर्दैन?
नकरात्मक विचारहरूले खेलाडीहरू राम्रो प्रदर्शन गर्न कोसिस गर्दैनन्, तर दिमागमा सेरोटोनिनको स्तर पनि कम गर्दछन्। सेरोटोनिनको एक उच्च स्तर सीधा राम्रो काम प्रदर्शन र नेतृत्व क्षमता संग जोडिएको छ।
खेलकुद कार्यक्रमहरूको दौरान ध्यान केन्द्रित रहन र उनीहरूको उत्तेजनाको स्तर नियन्त्रण गर्न एथलीटलाई प्रशिक्षण दिन AVE उपकरणहरू धेरै प्रभावकारी हुन सक्छन्। भिजुअलाइजेशनको साथ AVE को उपयोग गर्नु यो प्राप्त गर्ने राम्रो तरिका हो।
यो प्रसन्नता प्रो सत्रको पाँच छुट्टै कोटीहरू प्रस्तुत गर्दछ: प्रत्येक श्रेणीको लागि पाँच चयनको साथ शक्ति, ध्यान, ब्रेन बूस्टर, निन्द्रा र राम्रो महसुस। यसमा पाँच अटो प्ले गर्ने ध्वनि सिnc्क सत्रहरू र पाँच स्थानहरू तपाइँले डेभिड सत्र सम्पादकको साथ डिजाईन सत्रहरू भण्डारण गर्नका लागि समावेश गर्दछ। लोकप्रिय १०० हर्ट्ज पनि समावेश छ CES कुनै सत्रको साथ।
हाम्रो सत्रहरू राम्ररी परिक्षण गरिएको छ र तपाईंलाई सबैभन्दा प्रभावकारी नतिजा सुनिश्चित गर्न हालका शोध अनुसन्धानहरूमा आधारित छ। डेलाइट प्रोमा सत्रहरू अनुसन्धान अध्ययनहरूले समर्थन गर्दछ। डिलाइट प्रो सत्रहरूले हाम्रो स्वामित्व रेन्डमाइजेशन प्रक्रिया पनि समावेश गर्दछ, जसले हदबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्न र प्रवेश प्रक्रिया बढाउन मद्दत गर्दछ।
डिलाइट प्रो ले ठूलो पढ्न सजिलो, अप-अपरेट अपरेट अप बटनहरू प्रदान गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सत्र सजिलैसँग चयन गर्न अनुमति दिन्छ। डिलाइट प्रो सत्र वर्ग बटनहरू अन्धकारमा उनीहरूलाई हेर्नको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिनको लागि जलाइएको छ।